AmaKonokono azakuqubisana neDSG – Grocott's Mail
You are at:Home»SPORT»AmaKonokono azakuqubisana neDSG
AmaKonokono azakuqubisana neDSG
By Grocott's Mail Contributors February 21, 2020 Updated: February 21, 2020 No Comments1 Min Read
Amagqiyazana nawo amaxhaphetshu elungiselela umdlalo ozakubayimbali kwibhola yabaseTyhini yalapha eMakhanda. NgeCawa oompondo zihlanjiwe nooxholovane bebhola yamanina nabaphumelele intshinga yalengingqi yeSarah Baartman izihlandlo ezisixhenxe zilandelelana, iAfrican Connection izobe ijongene nqo neqela lamanina laseDSG.
Iqela laseDSG liqale ukudlala imidlalo yalo kulonyaka ophelileyo kwaye lisebenzisa lomdlalo ukuzilungiselela itumente yezikolo yamanina.
Umqeqeshi weliqela umnumzana Ntokozo Dube uthi uchulumancile kwaye uwujonge ngamehlo abomvu lomdlalo. Umdlali odlale ithuba elide kwiqela lamaKonokono oyinkonde nokwangusekela mqeqeshi, uthi lo umdlalo uzakuba yimbali nanjengoko bezakudibana neliqela okokuqala nqga, kwaye eli lithuba lokujonga abadlali abasafunda ukudlala nabo baselula ukuze bazibonakalise kwaye bazame ukuzibethelela kweliqela.
Lo mdlalo uzakuba ngeCawa kwibala laseDSG ngomkhono phambi kwentsimbi yeshumi elinambini. Omabini lamaqela azakube esebenzisa lomdlalo ukujonga apho kufuneka alungise khona.
Previous ArticleLocal companies tackle eyesore
Next Article Callies celebrate first season win